Fampahalalana sy fitehirizam-bokin'ny orinasa Shelf Corporations Nevada
Azonao atao ny misafidy ny orinasa Nevada Aged Corporations sy Nevada Shelf Company anay. Ho hitanao ny orinasa Shelf Corporations, Aged LLC ary na dia ny programa fampiroboroboana trosa azonao ampiana amin'ny orinasanao aza. Manolotra tombony maro i Nevada, raha te hahalala bebe kokoa momba Mampiditra ao Nevada, azonao atao ny mianatra momba ny tombony amin'ny hetra any Nevada, ny lalàna mifehy ny asa aman-draharaha, ny karazana tahiry azo omena amin'ny ho avy ary ny fampahalalana mampiditra bebe kokoa.
Tombony azo avy amin'ny orinasa Nevada Shelf Corporation
Afaka manomboka mandray soa avy hatrany amin'ny fananana orinasanao any Nevada ianao amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny fividianana orinasa iray efa tafiditra, na a Orinasa Nevada Shelf Corporation.
Ny orinasa antitra Nevada dia manome tombony mitovy amin'izany amin'ny orinasa Nevada sy maro hafa. Samy tsy mandoa hetra amin'ny fanjakana, manana lalàna miaro ny fananana matanjaka ary manana tsiambaratelo momba ny fananana. (Ny teny hoe "talantalana" dia midika fa ny orinasa dia niforona talohan'ny datin'ny fividianana ary matetika nipetraka teo amin'ny talantalana miandry mpanjifa mila orinasa lehibe izy.)
Tombontsoa sy fampahalalana fanampiny an'ny orinasa Nevada Shelf
Ny tompona orinasa antitra ao Nevada dia tsy raharaha firaketana an-tsoratra.
Tsiambaratelo - Tsy mizara ny mombamomba ny orinasa amin'ny Internal Revenue Service (IRS) i Nevada. Amin'ny maha fanjakana tsy andoavan-ketra, tsy manangona vaovao toy izany izy ireo hizarana. (Mazava ho azy fa mamporisika ny fanajana tanteraka ny tompon'andraikitra amin'ny hetra izahay.)
Fiarovana ny fananana - Ny Nevada ihany (aamin'ity fanoratana ity) no miaro ny tompon-tany mamorona fatiantoka ny anjarany rehefa nitory manokana izy ireo.
Fampivoarana haingana sy fandefasana: Ny Nevada Corporation voarafitra tsara dia azo alefa haingana. Ny orinasa antitra iray any Nevada dia azo atolotra avy hatrany.
Fandoavam-bola fanavaozana ambany isan-taona - Ny fanavaozana isan-taona izay misy ny fametrahana ny lisitry ny manamboninahitra sy ny talen'ny $ 125 isan-taona fotsiny ho an'ny ankamaroan'ny mpanjifa amin'ity lahatsoratra ity.
Manendry tompon'andraikitra sy mpitantana hafa - Mifehy ny orinasa ny tompon-trano. Noho izany, azonao atao ny mifehy ny orinasanao ary tsy miseho ao amin'ny firaketana ampahibemaso ny anaranao amin'ny alàlan'ny fanendrena ireo manamboninahitra sy talen'ny antoko fahatelo izay manaiky hijoro ho anao ao amin'ny firaketana ampahibemaso. Misy olo-malaza sy olon-kafa izay, na dia manara-dalàna tanteraka aza, dia aleony tsotra fotsiny ny tsiambaratelo momba ny fiainana manokana. Averina indray, io dia tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny fomba ara-dalàna sy etika.
Ho an'ny orinasa tombony
Ho an'ny orinasa tombony dia sokajian'ny IRS ho orinasa "C" na "S". Amin'ny ankapobeny ny orinasa "C" dia hetra misaraka amin'ny tompon-tany ary ny orinasa "S" dia tompon'andraikitra amin'ny hetra amin'ny tombom-barotra amin'ny orinasa.
Ny saram-panjakana ho an'ny lisitry ny manamboninahitra sy ny talen'ny isan-taona any Nevada dia $ 125 ankehitriny.
Jereo ny orinasa lehibe ao amin'ny Inventory Nevada